Love Coffee ညစ်ညမ်းကော်ဖီ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
တနှစ်တခါ တင်နေရတာ သုံးနှစ်ရှိပါပြီ။ သင်္ကြန်အတွင်း မိန်းကလေးများ အထူးသတိပြုရမည့် ကာမစိတ်ကြွစေနိုင်သည့် ကော်ဖီမစ်ဆိုတဲ့ သတိပေးသတင်းတခုကို (ဖေ့စ်ဘွတ်) မှာ တမြန်နှစ်ဒီအချိန်လောက်က တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲတာနဲ့ လေ့လာကြည့်တော့ ဒီလိုဒီလို တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းရေးသူရေးသလို ကော်ဖီမစ်တော့ မဟုတ်ပါ။ တရုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Love Coffee (XS-X0014-D) လို့ အရောင်းကုမ္ပဏီရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
လိင်စိတ်အားပေးစေတဲ့ကော်ဖီလို့ ရေးထားပါတယ်။ ကြော်ညာတဲ့ဆိုက်က ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာက အမြီးအမောက်သိပ်မတည့်တာလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ကြောညာထဲမှာ (ပရက်ဆီးဒင့်) ဆိုသူဟာ ဒီကော်ဖီဆိုတာသောက်ပြီး ၁ဝ မိနစ်နေတော့ အသက်ရှူမဝသလိုဖြစ်လာ၊ ခေါင်းထဲရှိတာကို ဖွင့်ပြချင်လာ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ အတူနေချင်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ထုတ်ကုန်စာရင်းထဲမှာ ဒါတွေလဲပါသေးတယ်။
1. Slimming Products Slimming Products ပိန်ဆေး၊ = ဆေးတောင့်၊ ဆေးပြား၊ ကော်ဖီ၊ ဆေးရွက်၊ ဆေးမှုံ့။
2. Male and female health products Man and woman Sex products ယောက်ျားသုံး၊ မိန်းမသုံး ကျန်းမာရေးနှင့် လိင်ဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ = ကွန်ဒွမ်၊ လိင်ဆေးတောင့်၊ လိင်ဆေးပြား၊ ဗိုင်ယာဂရာ (ပန်းသေခြင်းအတွက်ဆေး)၊
3. Woman sex products Woman sex products မိန်းမသုံး လိင်ဘက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ။ အခုပြောနေတာက ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကပါ။
တရုပ်နိုင်ငံ၊ ဖူဂျီယန်၊ ဖူဇိုးမြို့ကထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
• Kamagra-100 Sildenafil Citrate Tablets ပန်းသေ-ပန်းညှိုးအတွက်ဆေး၊
• Mens Coffee ယောက်ျားသောက်ကော်ဖီ၊
• STIFF NIGHTS ကျား-စိတ်လာဆေး၊
• Love Coffee မ-စိတ်လာဆေး စတဲ့တခြားဆေးအမျိုးမျိုးတွေလည်း ကြောညာမှာပါသေးတယ်။
သင်္ကြန်မှာသာမက နှစ်ကူးပြီးရင်ပါ သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ မကောင်းမှုဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိဆိုတာ မှန်သလို မကောင်းတာလုပ်ချင်သူတွေက နားရက်မယူကြလို့ပါ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။